Xiriirrada - YTpals
Hesho 20% Komishanka iibka iyo helitaanka lacagta kadib helitaanka $ 100 +
Soo gal ama iska diiwaangeli sida kuxidhan
Barnaamijkeenu waa u bilaash inuu ku biiro. Way fududahay in la isqoqo oo uma baahna aqoon farsamo. Barnaamijyada xiriirku waa ku badan yihiin internetka oo waxay siiyaan milkiilayaasha websaydh siyaabo dheeri ah oo faa'iido looga helo websaydhkooda.
Sida ay u shaqayn?
Markaad ku biirto barnaamijkayaga xiriirka, waxaa lagu siin doonaa isku xirka URL gaar ah oo aad ku dhex dhejin karto shabakadaada ama ku wadaagi kartid emaylka ama bogaggaaga warbaahinta bulshada. Marka isticmaale uu gujiyo mid ka mid ah xiriiriyeyaashaada gaarka ah, waxaa loo keenayaa websaydhka waxqabadkoodana waxaa ku baari doona barnaamijyadeena xiriirka. Waxaad kasban doontaa guddi marka ay wax iibsadaan.
Nooca guddiga: Bixinta-Iibinta 20% iib kasta oo aad keentid.
Shuruuda Lacagta: $ 100 USD - isku dheelitirka ugu yar ee looga baahan yahay bixinta.
Muddada Lacagta: Lacag bixinta waxaa la bixiyaa bishiiba mar, bishii ugu dambeysay.
Faahfaahinta kale oo dhan fadlan nala soo xiriir.
Noqo Xiriiriyaha Hada